လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: January 2014
ဇန်န၀ါရီလ (၃၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ St Mary's Cathedral မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လင်းလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့ရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ
Friday, January 31, 2014 ဓါတ်ပုံ
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို အတူတက်ရောက်ပေးဖို့ ၇ ရက်တာ ချစ်သူကို ယွမ်တစ်သန်း ($165,300) နဲ့ငှား
Friday, January 31, 2014 ထူးဆန်းထွေလာ
Hangzhou ကတရုတ် လူငယ် တစ်ယောက်က နှစ်သစ်ကူး အချိန်မှာ ဇာတိမြေ ကိုပြန်ပြီး နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို အတူ တက် ရောက်ပေးဖို့ ၇ရက်တာ ချစ်သူကို ယွမ်တစ်သန်း ($165,300) နဲ့ငှားချင် ပါတယ်တဲ့။
အင်္ဂလန်တွင် ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝဆေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများအား ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေါင် ၄၀၀၀ ပေးအပ်မည်
Friday, January 31, 2014 Scholarship (ပညာသင်ဆု)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးနှင့် ဇီဝဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ် တက်ရောက်လိုသော မြန် မာကျောင်းသားများအတွက် ပညာသင်ထောင်ပံ့ကြေးပေါင် ၄၀၀၀ အထိ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
နာမည်ကျော် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် မြန်မာ့ပညာရေးကဏ္ဍတွင် လေးနှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ကူညီမည်
Friday, January 31, 2014 ပညာရေး
ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်အသေးစိတ်ညှိ နှိုင်းမှုများ ပြီးဆုံးပါက မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အနေဖြင့် ပညာရေးကဏ္ဍ တွင် လေးနှစ် စီမံကိန်းနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု မိုက်ခ ရိုဆော့ဖ်မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ Knowledge Centricity မှ သိရသည်။
Friday, January 31, 2014 Anti-virus & Security | Windows OS ဆိုင်ရာ
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် တင်ပေးလိုက်သလဲဆိုတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ Facebook သုံးနေတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ သတိထားစရာလေးရှိအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
Anti-virus & Security, Windows OS ဆိုင်ရာ,
Windows တွေအတွက် အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Video Editing Softwares များ...
Friday, January 31, 2014 Multimedia
LightWorks : Hollywood ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားအချို့တောင် ဒီ Video Editor ကိ်ု သုံးတယ်ဆိုပဲ... Batman တို့ Mission Impossible စတဲ့ ဇတ်ကားတွေကို ဒီကောင်လေးနဲ့ လုပ်ထားတယ်လို့ ပြောတယ်...
Online ကနေ အခမဲ့ Fax ပို့နိုင်တဲ့ Site ၁၀ ခု...
Friday, January 31, 2014 Tips & Tricks
Thigh Tattoos Designs...
Friday, January 31, 2014 အနုပညာလက်ရာ
Thursday, January 30, 2014 အနုပညာလက်ရာ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ English Grammar Book for Android
Thursday, January 30, 2014 Android Apps & Games
ဒီနေရာမှာလည်း www.englishgrammarbook.org ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Good Luck.... Ko Myo
Thursday, January 30, 2014 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ E-Books များ...
Thursday, January 30, 2014 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
အပျိုဖော်ဝင်စ ဆယ်ကျော်သက်တွင် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ (ရည်ရည်ဌေး)
သန္ဓေကာတာ – ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေးလ်
ဒါစိုးရိမ်စရာလား နှင့် စိုးရိမ်စရာများ – ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်
သူနာပြုလက်စွဲ – ဒေါက်တာစံပယ်ပွင့်ဖြူ
မိဘများအတွက်အရိပ်ပြစကားလက်ဆောင်မွန်များ – ဒေါက်တာသိန်းလွင်
တစ်နေ့တွင် ၁၀ နာရီနှင့် အထက် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် နှလုံးကို ထိခိုက်စေပြီး ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်
တစ်နေ့တွင် အလုပ်ချိန် ၁၀ နာရီနှင့် အထက် အလုပ်လုပ်သူများသည် နှလုံးကို ထိခိုက်စေပြီး ပုံမှန် ၇ နာရီ အလုပ်လုပ်သူများထက် ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း အပါအဝင် ပြင်းထန်သော နှလုံးရောဂါ ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ပိုမိုခံစားရမည်ဟု သုတေသီများက ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
လန်ဒန်အခြေစိုက် သုတေသန အဖွဲ၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့၏ သုတေသနပြုမှု အတွင်း ရုတ်တရုက် နှလုံးခုန် ရပ်ခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်စူးအောင့်ခြင်းများ အပါအဝင် နုလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှု ၃၆၉ ခုရှိရာ သတ်မှတ် လုပ်ချိန်ထက် ၃ နာရီမှ ၄ နာရီ အချိန်ပို အလုပ်လုပ်သူများအဖို့ အဆိုပါ နုလုံးရောဂါ၏ ဆိုးကျိုးအန္တရယ်များ သက်ရောက်ရန် ပုံမှန်ထက် ၆၀ရာခိုင်နှုန် ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် ပုံမှန် အလုပ်ချိန် ၇ နာရီ ထက် တစ်နေ့တွင် အချိန်ပို ၁နာရီမှ ၂နာရီခန့် ပိုမို အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် ထိုနုလုံးရောဂါ၏ ဆိုးကျိုး အန္တရယ်များ ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း မဖြစ်ပွားနိုင်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီ နှလုံးရောဂါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက သတ်မှတ်ချိန်ထက် ၃ နာရီနဲ့ အထက် ပိုပြီးအလုပ် လုပ်မှ ဖြစ်ပွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ထက် တစ်နာရီလောက် ပိုသွားရုံနဲ့တော့ ဆိုးကျိုး ကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘူး” ဟု University College London နှင့် Finnish Institute of Occupational Health မှ ရောဂါ ကူးဆက်ပျံ့ပွားမှု ကာကွယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပါရဂူ ဒေါက်တာ Marianna Virtanen ကပြောကြားပါသည်။
ထိုသို့ အချိန်ပို အလုပ်လုပ်သောကြောင့် နှလုံးရောဂါ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားမှုပမာဏ မြင့်တက်လာခြင်း မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရောဓာတ် မြင့်မားခြင်း စသည့် နှလုံးရောဂါအတွက် အန္တရယ်ရှိနိုင်သော အခြား အကြောင်းအရင်းများ အပေါ် ဆက်နွယ်မှီခိုမှု မရှိဘဲ သီးခြား အကျိုး သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပွားစေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ဒေါက်တာ Marianna Virtanen ၏ အဆိုအရ နှလုံးရောဂါကို အန္တရယ် ပေးနိုင်သော အဝလွန်ခြင်းနှင့် အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းတို့ ကဲ့သို့ပင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိုမိုအလုပ် လုပ်သော နေထိုင်မှု ပုံစံသည်လည်း ရောဂါအပေါ် တူညီသော ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားစေသည်ဟု သိရသည်။
“အကျိုးရလဒ်က တစ်ကယ့်ကို ရိုးရိုးလေးပါ။ အရေးပါမှုကတော့ ပုံမှန် လက်ခံထားတဲ့ အချက်တွေထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ အချိန်ပို အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှ လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားတွေပါ အပိုတွဲပါလာတတ်ပြီး အဓိကအချက်ကတော့ ဒါတွေက နှလုံးသွေကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပမာဏ မြင့်မား လာတာပါပဲ” ဟု ပါမောက္ခ Gordon McInnes က ပြောကြားပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ (၂၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ပိဋိကတ်သုံးပုံ နိကာယ်စာသင်တိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ လင်းလင်း (ခ) မောင်ထွေးလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး
Wednesday, January 29, 2014 ဓါတ်ပုံ
လေယာဉ်မောင်း လေ့ကျင့်ချင် သူများအတွက် Infinite Flight APK (Android Game)
Wednesday, January 29, 2014 Android Apps & Games
• Included: Airbus A380 – 800, Boeing 717-200 , CRJ – 200 , Space Shuttle , P – 38 Lightning , F/A-18 Hornet , Airbus A321 , Boeing 787-900 Dreamliner C – 17 Globemaster III , Supermarine Spitfire , Boeing 747-400 , A – 10 , Boeing 737-800 , Cessna 172SP , Cirrus SR22 , Super Decathlon• IAP : Boeing 767-300 , Boeing 757-200 , Airbus A340 – 600, Airbus A330 – 300 , Embraer ERJ – 170 ERJ – 175 ERJ – 190 ERJ – 195 F – 16 Falcon , F – 14 , Airbus A330 – 200F
Requires Android : 4.0 and later
Google Play Store မှာတော့ ထိုင်းငွေ 164.18 ဘတ် ပေးရပြီး... အခမဲ့ဒေါင်းချင်ရင်တော့....
Zippyshare Or Datafilehost Or Tusfiles
Enjoy and Good Luck... Ko Myo
Tuesday, January 28, 2014 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
သတင်း = အခုပေါ်နေတဲ့ Ice ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် ကျန်းမာရေးက ကြေငြာထားပါတယ် (လွင်သန္တာစိုး) Ice ဆိုတာ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်တယ်။ Methamphetamine ဖြစ်တယ်။ Base လို့လဲခေါ်တယ်။ Amphetamine ဆေးအုပ်စုထဲက ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ Speed လဲပါသေးတယ်။
Tuesday, January 28, 2014 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ပြည်စကားအသုံးအနှုန်းဟူသည် ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်း၌ပင် နေရာဒေသအလိုက် ကွဲပြားခြား နားတတ်၏။ ယင်းကိုဒသိယစကားဟုခေါ်သည်။ မြန်မာဘာသာ စကားတစ်မျိုးတည်း၌ပင် ကျွန်တော် တို့အောက်သူအောက်သားတွေ သုံးနှုန်းသည့်အသုံးအနှုန်း၊ လေသံနှင့်အညာသူ၊ အညာသားတို့၏ အသုံးအနှုန်း၊ လေသံချင်းမတူ။ ဘိတ်၊ ထားဝယ်ဘက်ကသူတွေနှင့် အသုံးအနှုန်း၊ လေသံချင်းမတူ။ အင်းသားတို့နှင့်မတူ။ နေရာဒေသကိုလိုက်၍ ကွဲပြားခြားနားကြ၏။
နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမည်
Tuesday, January 28, 2014 ပညာရေး
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန် ယင်းဝန်ကြီးဌာနက ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြတ်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
2014 Miss International Beauty Pageant Winner (Japan)
Tuesday, January 28, 2014 ဓါတ်ပုံ
Flash Games စုစည်းမှု (၄)
Tuesday, January 28, 2014 PC Games
Android Applications စုစည်းမှု...(၁၇)
Tuesday, January 28, 2014 Android Apps & Games
Best Top Paid Android Applications....
AccuWeather for Android 2.1.5.apk 10M
Adobe Reader 10.3.2.apk 5.9M
Alarm Clock Pro v1.0.4.apk 5.4M
Android Eye - Computer Vision v1.1.0.apk 673K
AppExtractor 1.5.8.apk 224K
App Quarantine ROOTFREEZE 1.25.1.apk 1.2M
Audio Evolution Mobile v1.1.8.apk 2.1M
Android Applications စုစည်းမှု...(၁၆)
Monday, January 27, 2014 ထွေရာလေးပါး
Windows 8 +Launcher v2.3
Monday, January 27, 2014 Android Apps & Games
Android Devices တွေအတွက် Windows 8 +Launcher လေးပါ.. Google Play Store မှာတော့ ထိုင်းငွေ ၁၁၀.၀၉ ဘတ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်... Size ကတော့ 7.36 MB ပါ...
အခမဲ့လိုချင်ရင် ဒီမှာယူ... Windows8 / Windows 8 +Launcher v2.3 apk free
ငွေပေးဝယ်ချင်ရင် ဒီမှာသွား... Windows8 / Windows 8 +Launcher v2.3 google play store
Monday, January 27, 2014 Anti-virus & Security
Subway Surfers 1.18.0 (Android Game)
Download Links: Zippyshare Or Tusfiles Or Datafilehost (Size: 37.97 MB)
Exodus Necklace of Heavens (Android Game)...
Download Links: Zippyshare Or Tusfiles Or Hugefiles (Size: 183.28 MB)
Enjoy and Good Luck.... ကိုမျိုး
Angry Birds Go 1.0.4 MOD APK + DATA PROPER (Unlimited Gold Coins)
Download Links: Zippyshare Or Tusfiles Or Datafilehost
Windows 8.1 RTM Activator... (sarkarzone)
Monday, January 27, 2014 Windows OS ဆိုင်ရာ
Windows 8.1 RTM Activate လုပ်နည်း...
1.REMOVE installation key first using “Winact 1.4.1″ (Right Click “Run as administrator).
Choose “options” and “unistall product key”.
2.Run A9600E (for x64 A9600E.bat) (Right Click “Run as administrator”) and wait. restart. activate online.
3.Run “My WCP watermark Editor” (Right Click “Run as administrator”)
Check the box “Remove all wathermark” and click on “Apply new settings”
ဒီမှာဒေါင်းပါ (Size: 3.39 MB)
Monday, January 27, 2014 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
Q 1: ကျမ အသက် ၂၇ နှစ်။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ ဝက်ခြံတော့ပျောက်နေပါတယ်၊ အမဲစက်တွေ ထွက်လာတယ်။ တင်းတိပ်လိုပဲ။ အရမ်း စိတ်ညစ်ရတယ်။ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့နည်းများ လမ်းညွှန်ပေးပါ။
Q 2: ကျမ အသက်က ၃၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ အသားညိုပါတယ်။ မျက်နှာမှာ ငယ်ကတည်းက အခုထိ ဝက်ခြံကြီးကြီး မပေါက်ဖူးဘူး။ ဆားဝက်ခြံလောက် တခါတလေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘာမိတ်ကပ်မှလည်း မသုံးဘူး။ တလလောက်ရှိပြီ တင်းတိပ် နှစ်ဖက်လုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ လက်သဲခွံလောက်ပါ။ေ ရးရေးလေး မြင်နေရတယ် ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ အချိန်လေး ရရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။့့ မှာ နေပါ တယ်။ နေပူတာလည်း သိပ်ရှားပါတယ်။
Monday, January 27, 2014 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
WHO ရဲ့စစ်တမ်း တွေအရ ဆိုရင် နှစ်စဉ် အသက် ၁၅နှစ်အောက် မိန်းကလေးပေါင်း ၁၄.၂ သန်းကျော်ဟာ အရွယ် မ တိုင်မီ လက်ထပ် ထိမ်းမြားမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေ ကြရပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ Alemtsahye လည်း အပါအ၀င်ပါ။
Alemtsahye Gebrekidan တစ်ယောက် သူ့ကလေးဘ၀ ဆုံးခန်းတိုင်သွားခဲ့တာ အသက် (၁၀)နှစ်မှာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ အပြင်မှာဆော့ နေတုန်း အမေက လှမ်းခေါ်လို့ အိမ်ထဲဝင် သွားတာ။ အမေက သမီး လက်ထပ် ရတော့မယ်လို့ ဆိုင်းမဆင့်၊ ဗုံမပါ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မမှာ အံ့ အား သင့်လွန်းလို့ ငိုတောင် ငိုမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူတို့ကို ဘာမှ ပြန်မပြော ခဲ့ပါဘူး။ Alemtsahye ကသူမဘ၀ အပြီးတိုင် ပြောင်းလဲ ခဲ့တဲ့ နေ့အကြောင်းကို အခုလို ပြန်ပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။
Dead Sky (Eng/PC Games)...
Sunday, January 26, 2014 Windows OS ဆိုင်ရာ
ဒီမှာဒေါင်းပါ (693.9MB) (Tusfiles)
* Burn/mount iso
Enjoy and Good Luck... ကိုမျိုး
ထိုင်း AIT ကျောင်းမှ မြန်မာကျောင်းသားဦးရေ ၄၀ ခန့် ပညာသင်ဆု ပေးအပ်ရန် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူ...
Sunday, January 26, 2014 Scholarship (ပညာသင်ဆု)
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Asian Institute of Technology (AIT) ကျောင်းသည် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ ၄၀ ခန့်အား NMFA Scholarship for Myanmar 2014 အမည်ရှိ ပညာသင်ဆုကို ပေးအပ်ရန် လျှောက် လွှာများခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Sunday, January 26, 2014 အနုပညာလက်ရာ
Facebook ထဲမှာ Search History တွေ မကျန်အောင် ရှင်းထုတ်မယ်...
Sunday, January 26, 2014 Tips & Tricks
Google တွေမှာ မိမိတို့ လည်ပတ်ရှာဖွေ ကြည့်ရှုထားသမျှ ခြေရာလက်ရာတွေ ကျန်ခဲ့သလိုပဲ Facebook တွေမှာလည်း Search History တွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်... သာမာန်အားဖြင့် သိပ်အရေးမကြီးဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးနေတဲ့သူ အတော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ Privacy reasons တွေအတွက် အရေးပါနေဆဲပါ... အဲဒါကြောင့် facebook ပေါ်မှာ လည်ပတ်ကြည့်ရှု ရှာဖွေလှန်လှောထားသမျှတွေ ကို ခြေရာလက်ရာတွေ မကျန်အောင် အပြတ်ရှင်းခဲ့ချင်တယ် ဆိုရင်တော့....
Progesterone Injection (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ထိုးဆေး
Sunday, January 26, 2014 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
အမေး။ အမျိုးသမီးတချို့က 1 month ထိုးဆေးကို Menstruation ပုံမှန်လာလို့ဆိုပြီး ထိုးချင်ကြပါတယ်။ ထိုးရင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသူများလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ထိုးသင့် မသင့်ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ Menstruation မလာရင်နေထိုင်မကောင်းလို့ 3-mnth ကိုလည်း မထိုးချင်ကြလို့ပါဆရာ။ ဒြီ့ပင်နည်းလည်း မသုံးချင်ရင်ပါဆရာ။
Saturday, January 25, 2014 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
ဇန်န၀ါရီလ (၃၀) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ St Mary's Cathedra...
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို အတူတက်ရောက်ပေးဖို့ ၇ ရက...
နာမည်ကျော် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် မြန်မာ့ပညာရေးကဏ္ဍတွင် လေး...
Windows တွေအတွက် အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Video Editing S...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ English Gra...
တစ်နေ့တွင် ၁၀ နာရီနှင့် အထက် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် နှလ...
ဇန်န၀ါရီလ (၂၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ပိဋိကတ်သုံးပုံ နိက...
လေယာဉ်မောင်း လေ့ကျင့်ချင် သူများအတွက် Infinite Fli...
ထိုင်း AIT ကျောင်းမှ မြန်မာကျောင်းသားဦးရေ ၄၀ ခန်...
Facebook ထဲမှာ Search History တွေ မကျန်အောင် ရှင်း...
Paresthesia ပါရက်စသီးဇီးယား အာရုံကြောရောဂါ...
ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင် မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီခင်ယုမေ ကွယ...
Android သမားများအတွက် APK Games များ (Updates).......
Blood Knights (Eng/Games PC)...
AVG 2014 Serial Keys (ALL TYPE)...
ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် မာရသွန်အပြေးသမား ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦ...
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ သဲကန္တာရထဲက စိုက်ခင်းပျိုး...
မြင့်မားသော စံနှုန်းများနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တည်...
University Scholarship Programme (USP)
တခုကို အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၀၀ ပေးဝယ်ရတဲ့ ထူးဆန်းကိတ်မု...
Behind Ear Tattoo Designs...
စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ ပညာသင်ဆုအတွက် မြန်မာကျောင်းသားနှ...
Dirty Medicines ညစ်ညမ်းဆေးတွေ
Rape Drungs prevention (1) ညစ်ညမ်းဆေးရန်က ဘယ်လိုကာ...
Rape Drungs prevention (2) ညစ်ညမ်းဆေးရန်က ဘယ်လိုကာ...
Dirty drugs ညစ်ညမ်းဆေးတွေ...
ဆေးခြောက်၏ အာနိသင်နှင့် ဆိုးကျိုးများ
Alexander Khokhlov ရဲ့ face paintings...
လက်ဆောင်တောင်းတဲ့ ဆရာမကို အလုပ်ဖြုတ်
DRIVERS for WIN7 & VISTA & XP (x32 & x64)...
DriverPack Solution 2013 (ISO File)...
Flash Games စုစည်းမှု (၃)
Flash Games စုစည်းမှု (၂)
Flash Games စုစည်းမှု (၁)
Hacking ၀ါသနာရှင်များအတွက် Hacking Related Documen...